Hurumende Yazivisa Kumiswa kweMabasa Ekushanya kuLa Digue
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Hurumende Yazivisa Kumiswa kweMabasa Ekushanya kuLa Digue
Kumiswa kwakazara pazvirongwa zvekuvandudza pekugara zvekushanya zvichatanga kushanda kubva Nyamavhuvhu 1, 2021, kusvika 2023 sezvo chiito chekukurumidza chinodiwa kuchengetedza La Digue kubva pamusoro-kusimudzira uye kuchengetedza mararamiro ayo.
Kutsvaga kweKutakura Kukwanisa Kudzidza kweLa Digue kwakaitwa muna 2019-21 kwakaziviswa nhasi.
Chidzidzo ichi chakapihwa masimba ekumisikidza yazvino mamiriro ekuvandudza echitsuwa ichi.
Iyo zvakare inopa kurudziro yekutungamira hurumende mukugadzira marongero ekugadzirisa kukura kwekushanya nekuwana kusimudzira kwekushanya kwekusimudzira pachiwi chidiki.
Bazi rezveKushanya rakazivisa neMuvhuro, Chikunguru 26, mumusangano wakaitwa nevakuru vakuru veDhipatimendi pamwe nevatori vechikamu paLa Digue kuti vape zvakawanikwa neCarrying Capacity Study yeLa Digue yakaitwa muna 2019-21.
Chidzidzo ichi, chakaitwa nekambani yakazvimiririra yekupa mazano, Sustainable Travel International, yakapihwa mvumo yekumisikidza chinzvimbo chiripo cheichi chitsuwa pamwe nekupa kurudziro yekutungamira hurumende mukugadzira marongero ekugadzirisa kukura kwezvekushanya nekuwana budiriro yekusimudzira yekushanya pachitsuwa chidiki.
La Digue, imwe yeakanakisa kwazvo e zviwi zveSeychelles nemararamiro ayo akasarudzika, mabhureki egranite akasarudzika uye imwe yemabhishi anotorwa mifananidzo kwazvo pasirese, akagamuchirwa mu2019, 17,868 vehusiku husiku mune dzimwe nzvimbo dzekugara makumi matanhatu neshanu dzinowanikwa pachitsuwa ichi.
Zvakawanikwa zvaratidza kuti pane chikonzero chekuti dhipatimendi riongorore zvirongwa zvebudiriro pachitsuwa ichi, Mai Bernice Senaratne, Director for Policy, Research, Monitoring and Evaluation kuDhipatimendi rezveKushanya, vakadaro mumusangano, wakaitwa kubva Mahofisi makuru eDhipatimendi paBotanical House pamberi paGurukota rinoona nezvekunze uye Tourism, VaSylvestre Radegonde, Secretary Secretary wezvekushanya, Mai Sherin Francis naSinha Levkovic Director veChigadzirwa Chigadzirwa neMuvhuro.
Ipo chiitiko ichi chiri kuitwa, kutanga kubva Nyamavhuvhu 1, pachave nekumira kwakazara pane vese mapurojekiti ekuvandudza dzimba dzekushanya pachitsuwa kusvika muna 2023 sezvo chiito chekukurumidza chinodiwa kuchengetedzwa kwechitsuwa kana kusvika kusvika kwevaenzi nekugara, mitengo inodzoreredzwa. Kumiswa uku kunoitika mumamiriro ekuenderera mberi kwekuvandudzwa kwenzvimbo dzakakosha dzekugadzira dzakadai semvura, magetsi uye tsvina inozopa kukura muindasitiri.
Iko kudiwa kwekuumba chirongwa chekudzoreredza kuona nzira yekudzoka uchifunga nezvekukanganisa kwekushanya pachitsuwa uye hupfumi hwenyika, uye kumabhizinesi nevagari zvakafanana, kwakakosha, kudzidza kwakaratidza.
Mazano akakosha eiyo 2019-2020 Kutakura Kugona Kudzidza kweLa Digue inosanganisira: